ZBN Psa senitrogen nokuparira mudziyo - China Hangzhou Poly Air Separation Equipment
Kushanda musimboti: Psa senitrogen kugadzira mudziyo ndiko kushandisa kabhoni samolecular nomusero sezvo adsorbent, kushandisa nheyo kufurirwa famba adsorption (Mapisarema) kuti senitrogen michina. Under imwe kumanikidzwa, kushandisa senitrogen uye neoxygen iri mumhepo pamusoro diffusion mwero kusiyana kabhoni samolecular nomusero Yakakura, carbon samolecular nomusero adsorption nokukurumidza mukuru kupfuura okisijeni senitrogen, okisijeni iri kabhoni samolecular nomusero adsorption zvizhinji, vapfume kuti senitrogen mamorekuru mu t ...
Psa senitrogen Kugadzirwa mudziyo ndiko kushandisa kabhoni samolecular nomusero sezvo adsorbent, kushandisa nheyo kufurirwa famba adsorption (Mapisarema) kuti senitrogen michina.
Under imwe kumanikidzwa, kushandisa senitrogen uye neoxygen iri mumhepo pamusoro diffusion mwero kusiyana kabhoni samolecular nomusero Yakakura, carbon samolecular nomusero adsorption nokukurumidza mukuru kupfuura okisijeni senitrogen, okisijeni iri kabhoni samolecular nomusero adsorption zvizhinji, vapfume kuti senitrogen mamorekuru vari gasi chokutambudzika, kuparadzana okisijeni uye senitrogen; Panguva iyoyo sezvo kabhoni samolecular nomusero okisijeni adsorption vanokwanisa kunosiyana-siyana pamwe chete siyana kufurirwa kunokosha kusiyana, kuderedza kunetseka, unogona desorption kuti kabhoni samolecular nomusero adsorption okisijeni, carbon samolecular nomusero patsva, kudzokorora kuoresa.
Achishandisa shongwe maviri kana kupfuura adsorption shongwe muitiro, achishandisa mabikirwo PLC chirongwa kudzora shongwe kubereka senitrogen adsorption, kuti desorption neshongwe patsva, zvinogara, ari kuramba kugadzirwa yepamusoro senitrogen.
, Pasi simba rakawanda, yakadzikama kuita, anochinjika simba, kukurumidza, gasi goho uye rucheno chinjika;
Kuedza kuzivisisa zvinhu zvomunhu chinogumbura mamiriro design, kusangana, kugadzwa, yakakunakira kuvhiyiwa, nzvimbo duku;
, Nyore oparesheni, akangwara kuzvidzora, uye anogona kuona unmanned oparesheni;
, Poly nemamwe zinga ematongerwo mubhedha mhando chenguva ano diffusion unyanzvi, mhepo ano vari kugara, kuitira kuti samolecular nomusero adsorption kunyatsoshanda;
Special kumanikidzwa kuchengetedzwa mudziyo, kunowedzera upenyu basa kabhoni samolecular nomusero;
Nemaonero nomukurumbira muchiso pamusoro pneumatic mavharuvhu, midziyo oparesheni kupa vimbiso;
Sakodzera senitrogen otomatiki nokuisa mano, kuti tibu- unhu rapera chigadzirwa senitrogen;
A siyana mhosva nechirwere uye aramu uye kugadzira mabasa;
Opsioneel ikabatwa sikirini murume-muchina inowanikwa, adaptive simba-kuchengetedza kuzvidzora uye dova pfungwa kuonekwa, DCS kutaurirana, etc.
Nitrogen Kugadzirwa: 1 ~ 3000 nm3 / h
Nitrogen gasi kuchena: 95% ~ 99,999%
The senitrogen kumanikidzwa: 0.1 ~ 0,8 MPa (chinjika)
Nitrogen gasi dova pfungwa: 40 ℃ ~ 70 ℃
Previous: ZBO Psa okisijeni urwu michina
Next: ZBO okisijeni zvakapfumisa combustion michina
VPSA Vacuum Kwezvokudya Nemiti jenareta
ZAS mukuru kunyatsoshanda mafuta-mvura separator
ZBN-3000E senitrogen zvokuita michina
80 cubic micro kupisa nokuomesa chikwata
ZBO Psa okisijeni urwu michina